LAMP wuxuu ku xiraa Windows Subsystem-ka Linux > Vielhuber David
LAMP wuxuu ku xiraa Windows Subsystem-ka Linux11
Markaad raadineyso jawiga horumarineed ee ugufiican , Windows 10 wuxuu bixiyaa xalal dhameystiran sida XAMPP , WAMP iyo MAMP , rakibaadda hooyo ee gacanta, iyo xalalka hufnaanta sida Vagrant ( Scotch Box ) iyo Docker ( Devilbox , Laradock ). Laakiin shuruudahayga awgood sida dib-u-habeynta bilaashka ah, shahaadooyinka dhabta ah ee dhabta ah ee SSL, helitaanka dhammaan aaladaha dhammaadka ee shabakadda maxalliga ah iyo sidoo kale xasilloonida sare iyo waxqabadka, dhammaan xalalka ayaa ku fashilmay - marka laga reebo mid.
Waxaan ku tijaabiyay dhammaan noocyada kala duwan (gaar ahaan Docker) bilihii ugu dambeeyay waxaanan la qabsaday Lando . Laakiin waxaa soo baxday in dhammaan xalalka ku saleysan Docker (iyo Vagrant) ee ku saleysan sababaha waxqabadka ee hoos yimaada Windows iyo Mac aysan waxtar lahayn mashaariicda leh tiro badan oo faylal ah ( aragtida bogga ayaa qaadatay illaa 25 ilbiriqsi). Waxaa jira mawduucyo badan oo halkan iyo halkan iyo halkan ah oo looga hadlayo sababta iyo xalalka suurtagalka ah .
Aniga ahaan waxaa jiray kiniinno aad u fara badan oo aan liqi karo - feylasha waa in aan lagu iswaafajin gacanta, laakiin si fudud ayaa loo heli karaa. Sidoo kale ma aanan dooneyn inaan dib ugu laabto MAMP PRO oo aan sanado badan isticmaali jiray (gaar ahaan naxdin hoosta Windows). Markaa waxaan dib ugu noqday bilowgii oo mar labaad ayaan isku dayay asal ahaan. Windows-ka hoostiisa tani waxay ahayd hawl foolxun oo qaab caadi ah ama dhanka Cygwin loo maro, illaa aan isku dayey WSL .
Waxaan horeyba khibrado aad uwanaagsan ugulahaa Windows Subsystem-ka Linux bilihii lasoo dhaafay kadib markii dhamaan adeegyadii LAMP ay shaqeeyeen kadib tijaabo gaaban iyadoon la xadidin dhanka xasiloonida iyo waxqabadka, waxaan imid gabagabada in Microsoft ay guulo waaweyn ku gaadhay halkan. Tan waxaa ku xiga aniga (si joogto ah u ballaadhiya) dejintayda oo ay ku jiraan dhammaan qoraalada ku saabsan bey'ada horumarineed ee aan hadda ku jiro ee Windows 10 Pro: